Bedelka Xiriirada ka iPhone in LG Optimus Si fudud
> Resource > Transfer > Transfer Xiriirada ka iPhone in LG Optimus
Kaliya waxaan ka helay phone Cricket LG Optimus iyo waxaan ognahay in aadan si ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada aan si aan telefoonka cusub ka iPhone. Cricket uusan isticmaalin kaarka Sim, sidaas darteed waxaan la yaabanahay hadii aad caawin kara inaan ogaado sida ay u guuraan dhammaan xiriirada aan si aan telefoonka cusub Android ka iPhone fadlan! Ma aanan rabin in ay gacanta ku sameeyo sababtoo ah waa mid aad u badan!
Dhab ahaantii, ma aha in aad u leeyihiin in ay wakhti badan ku qaataa in aad qortid dhan xiriirada on cusub aad hal jeer telefoon LG Optimus ka mid. Waa shaqo daalin oo wakhti dheer qaata. Halkii, waxaad si fudud u dhammayn kartaa marka aad mid caawiyaana awood - ka Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa inta badan loogu talo galay inay idinka caawiyaan wareejiyo oo dhan xiriir la leh 100% info dhamaystiran ka iPhone in LG Optimus ka mid ah. Kala iibsiga xiriir waa arrin ammaan ah, si degdeg ah oo habboon, oo aad samayn kartaa fudayd.
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in LG Optimus
Qaybta hoose ku diiradda saarayaa warramayay sidii ay u gudbiyaan xiriirada iPhone in LG Optimus 1 click aad. Hadda, download Wondershare MobileTrans iyo hubi tallaabooyinka fudud. Halkan qaadataa version Windows sida isku day ah.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka dib markii la rakibey on PC Windows ah
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa in ay sii wadaan hal-riix Wondershare MobileTrans on PC Windows ah. Its kooban oo user-dareen leh suuqa kala aasaasiga ah soo baxa. Guji Start iyo suuqa kala iibsiga telefoonka muuqataa.
Fiiro gaar ah: Lugood waa in sidoo kale lagu rakibo marka aad doonayso in aad wareejiso xiriirada iyo faylasha kale oo ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Waxaa ku hubin karnaa in Wondershare MobileTrans u shaqeeyo hab sax ah.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo LG Optimus in PC Windows ah
Markaas, fur in fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan labadaba iPhone iyo LG Optimus in PC socda Windows OS. Wondershare MobileTrans Waxay aqoonsan doontaa iyaga ugu dhaqsaha badan ka dibna iyaga tusay labada dhinac ee suuqa hoose. Your iPhone waa bidixda, iyo LG Optimus on xaq. Riix Flip marka aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada ka LG Optimus si iPhone .
Tallaabada 3. xiriirada Nuqul ka iPhone in LG Optimus
Markaas, riix Start Copy . Kala iibsiga xiriir The aad qaadataa wakhti yar. Suuqa ayaa xiriir kala iibsiga pop-up sidoo kale aad ayaa tilmaamaysa boqolleyda bar horumarka xiriir kala iibsiga. Marka iibsiga xiriir dhamaado, dhammaan dadka ay khuseyso waa la badbaadin doonaa kaadhka xusuusta gudaha ee aad LG Optimus.
Hadda, aad u guurtay xiriirada ka iPhone in LG Optimus. Raadi qaar ka mid ah xiriirada nuqul? Ha welwelin. Waxaad la xiriiri kartaa inay ku Wondershare MobileGo for Android caawimaad. Waa tababare Android, kaas oo awood kuu si aad u ogaato oo ku milmaan oo dhan xiriirada nuqul, iyo xiriirada kala iibsiga u dhaxeeya LG Optimus iyo Outlook, Windows Live Maill, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo file VCF.